Anokwale by GhanaThink, Benada. Ayɛwohomumu da 8, afe 2021 - Benada. Ayɛwoho da 20, afe 2021. 𓀠 36
Ba bi wɔ anyɛe-gyedi ahodow.
Ba bi hwɛ ahodow.
Hemfa?: Accra, Ghana
Mberebɛn?: Dwowda. Kɔtɔnimba da 31, afe 2021.
Woana?: Ba nye anyɛe-gyedi ahodow.
Ba nye hwi ahodow.
ɛho mmuaeɛ: Ba no kɔ sukuu hɔ.
#adwene-gyinae #yɛ #kyerɛ #ba #bi #wɔ #ahodow #nyɛe-gyedi #hwɛ #hemfa #mberebɛn #adɛn #biara #hia #nwomasua #woana #nye #hwi #ɛho mmuaeɛ #kɔ #sukuu